पोखराका २५ प्रतिशत पर्यटन व्यवसायी विस्थापित
२९ असार २०७८
पोखरा l २५ वर्षअघि लेकसाइडमा सुरु गरेको ट्रेकिङ पसल बालकृष्ण सुवेदीले कोरोना महामारीको समयमा बन्द गर्नुपर्‍यो । सशस्त्र युद्ध र २०७२ को भूकम्प झेलेर आएका उनी यो महामारीमा भने व्यवसायमा अडिइरहन सकेनन् । गंगापूर्ण भ्यु ट्रेकिङ सप छोडेर उनी कास्कीकोटमा खेतीकिसानी गर्छन् ।
उनले पसलका सामान कोठामा ल्याएर राखेका छन् । लाखौं रुपैयाँको सामान बिग्रिएला भन्ने डर छ । ‘घरबेटीले पनि भाडा मिनाहा गरिदिएनन्,’ उनले भने, ‘यो अवस्था कहिलेसम्म हुन्छ थाहा छैन । ऋण खोज्दै भाडा तिर्नुभन्दा बरु व्यवसायबाट हात झिक्न ठीक लाग्यो ।’ पाँच जनाको परिवार उनले ऋण खोजेरै चलाइरहेका छन् । सरकारले ल्याएको सहुलियत ऋण योजनामा उनले आवेदन दिएका छन् । पाउने नपाउने टुंगो छैन । भन्छन्, ‘व्यवसाय गरिरहेकाले अरू अनुभव छैन । जागिर खान उमेरले दिँदैन । अब कृषिभन्दा अरू उपाय छैन ।’
कोरोना महामारीको दोस्रो लहरसँगै लेकसाइडकै अमृत ट्रेकिङ सप, थ्रीस्टार ट्रेकिङ सप बन्द भइसकेका छन् । लेकसाइडमा रहेका करिब एक सय ट्रेकिङ सपमध्ये १२ प्रतिशत पूर्ण रूपमा विस्थापित भएको ट्रेकिङ इक्विपमेन्ट सप एसोसिएसन (टेसा) पोखराका अध्यक्ष नारायण सापकोटाले जानकारी दिए । केही ट्रेकिङ पसल बन्द हुने क्रममा छन् । ‘भएकामध्ये अहिले ७० प्रतिशत जति खुलेका छन्,’ उनले भने, ‘खोलेर पनि के गर्ने ! ग्राहक नै छैनन् ...
दम्भ र अहंकार नदेखाउन नवनिर्वाचित कमिटीका सदस्यलाई ओलीको निर्देशन
धर्म परिवर्तनको मुद्दामा पास्टरलाई २ वर्ष कैद
घरेलु उद्योगमा फड्को, एक वर्षमै झन्डै २ खर्ब लगानी
ओज गुमाएर फर्कंदै ओली
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पैसा लिएर नतिर्ने झण्डै १७ हजार ऋणी कालोसूचीमा
ट्याटु आर्टिस्टको निशानामा ४६ युवती : थप दुईले दिए ब्युरोमा जाहेरी
सुन तस्करी हुने आशंकामा त्रिभुवन विमानस्थलको सुरक्षा जाँचमा कडाइ
एमाले केन्द्रीय सदस्यमा को को भए निर्विरोध ? सूचिसहित